အဲလိုမြင်တဲ့ သူတွေလဲ ရှိတယ်နော်………..? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အဲလိုမြင်တဲ့ သူတွေလဲ ရှိတယ်နော်………..?
အဲလိုမြင်တဲ့ သူတွေလဲ ရှိတယ်နော်………..?
ဟိုးတုန်းကတော့ ဒေါင်းပျိုပေါ့.. ဒီလောက် နှစ်တွေကြာမှတော့ ဒေါင်းအိုတွေ ဖြစ်ကုန်ပါပြီ.. အမွှေးတွေ အတောင်တွေ လည်း မစုံတော့ဘူး..။ တုန်တုန်ရင်ရင် လှုပ်စိလှုပ်စိ၊ မပျက်မသားနဲ့..။ အမွေဆက်ခံတဲ့ ဒေါင်းတွေကော မရှိဘူးလား မဟုတ်ပါဘူး.. ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါင်းသွေးစစ်စစ် မဟုတ်တော့ပါဘူး.. ပက်ဝန်းကျင်က လင်းတ သွေးတွေ ရောကုန်ကြပါပြီ.. ဒီတော့ ဒေါင်းပေါက်လေးတွေက ဒေါင်းတစ်ပိုင်း၊ လင်းတ တပိုင်း ဖြစ်လို့..။ ဒေါင်းအိုတွေနဲ့ ဒေါင်းတပိုင်း လင်းတ တပိုင်း ပေါက်စတွေနဲ့ကလည်း မကြာခဏ ရန်ဖြစ်.. အဲ့ဒီ မျိုးမစစ်ဒေါင်းတွေနဲ့ ဒေါင်းအိုတွေကြားမှာ မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်း စိတ်ဓာတ်ရေးရာတွေ များစွာ ပျက်စီး ယိုယွင်းနေပါပြီ..။ နိုင်ငံကောင်းအောင် တစ်ခုမှလည်း မလုပ်တဲ့အပြင်၊ ကန့်လန့် တိုက်နေတာတွေ ရပ်သင့်ပြီ..။ ဘာမသိ ညာမသိ လူငယ်၊ လူကြီး ရဟန်းတွေလည်း အနီးမှာရှိတဲ့ မျိုးမစစ်ဒေါင်းလင်းတ တွေကြောင့် မိုက်ရူးရဲတွေလုပ်ခဲ့ကြလို့ သွေးမြေကြရတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ။ အဝေးက မျိုးမစစ် ဒေါင်းလင်းတ များကလည်း ဒေါင်းပုံလေးပြပြီး တောရေး၊ တောင်ရေး (တောကူး၊ တောင်ကူး ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်၊ ကိုယ်ပိုင် နိုင်ငံရေးအသိ၊ နိုင်ငံရေးလေ့လာမှုနဲ့ ရေးတာ တစ်ခုမှမရှိပါဘူး) တွေကြောင့်.. ပြည်ပရောက် လူငယ်တွေလည်း လင်းတစိတ်တွေဝင်ကုန်ကြပြီး အားရင် မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို ထိုးဆိတ်ချင်နေကြပါတော့တယ်။ ကိုယ်တိုင်မထိုးဆိတ်နိုင်ရင်တောင် လင်းတကြီးများကို အားကိုပြီး ထိုးဆိတ်ခိုင်းနေကြတော့ ရှေ့ကိုမရောက်တော့ဘူး။ ဒေါင်းခေတ်လည်း ကုန်တာကြာပါပြီ.. ဒေါင်းအိုတွေလည်း ဖင်ပြောင်နေပါပြီ..။ ဒေါင်းပြပြီး ဒေါ်လာတောင်းနေတဲ့ ဘလော့တွေလည်း ရှက်သင့်ပါပြီ…….။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင် နိုင်ငံအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ပုံချင်း ဆပေါင်းမျာစွာကွာခြားလှတဲ့ ခြေဖျားတောင် မမှီတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းကိုတော့ နိုင်ငံခြားကနေ စပွန်စာထုတ်ပေးကာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ပေးကြပြီး ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကိုတော့ ရိုက်မပေးလို့ ကိုယ့်ဘာကိုရိုက်ရမယ်ဆိုတာက လုံးဝ မဖြစ်သစ်ဘူးလို့ ဝါရင့် သမိုင်းဆရာတစ်ယောက်က အပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားက စပွန်ဆာတွေ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အစစ်အမှန် ကူညီချင်တယ်ဆိုရင် ဒေါ်စုအကြောင်းကို ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ့်အစား ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကိုသာ ရိုက်ပေးသင့်တယ်.. လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက် အသက် ၆၇ နှစ်အရွယ် မုဆိုးမဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ရုပ်ရှင်မင်းသား အချို့ကို နေအိမ်ခေါ်ပြီး စပွန်ဆာ ကိစ္စအပါအဝင် ညှိနှိုင်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လာမယ့် ၂၀၁၅ မှာ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ နှစ် ၁၀၀ မွေးနေ့မှာ ပြချင်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အမျိုးဂုဏ်ကို မစောင့်ပဲ နိုင်ငံခြားသားကို လက်ထပ်ကာ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မျိုးဆက်ကို ပျက်အောင် လုပ်ခဲ့မိတာကြောင့် သူ့အမှားအတွက် ပြန်ပြီး ပေးဆပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ ရှိပုံပေါ်တယ်လို့ နေအိမ်ကို သွားရောက်ခဲ့တယ် လူငယ် မင်းသားတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာ ဗိုလ်ချုပ် အကြောင်းရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေးကို လူရွှင်တော် ဇာဂနာ က တာဝန်ယူထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပေါချာချာ လူရွှင်တော် တစ်ယောက်က ရုပ်ရှင်ကြီး ရိုက်ဖို့ တာဝန်ယူထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းမှ ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးက အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကြည့်ရတာ လူရွှင်တော် ဇာဂနာ ဒါရိုက်တာလုပ်မယ့်ပုံပါ…. ဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိပဲ ရုပ်ရှင်ကားကြီး ရိုက်မယ်ဆိုတော့ ကောင်းကောင်းတော့ ထွက်လာမယ် မထင်ဘူး.. ပြီးတော့ လူရွှင်တော် ဇာကနာက သမိုင်း အလွန်အားနည်းသူဖြစ်တယ်… ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းရိုက်တာဆိုတော့ ချာတူးလန် မဖြစ်စေချင်ဘူး…” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း ရိုက်ထားတဲ့ ဇတ်လမ်းကို ဂါဒီယန်း သတင်းစာကြီးမှ ချာတူးလန်လို့ ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
“ဒီကနေ့ နာမည်ရနေကြတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ယောက်ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုပြီး စိတ်ကူးနဲ့ ခံစားကြည့်ပါလား .. ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်လိုမှ မခံစားတတ်အောင်ပါပဲ… ဘယ်သူနဲ့မှ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး” လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ လူရွှင်တော် ဖြစ်သူဇာဂနာက ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ဖြစ်တော့မှာမို့ အပျော်ကြီး ပျော်နေပြီး နိုင်ငံခြား သင်တန်းတွေ လိုက်တက်နေပါတယ်။ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းကတော့ သိပ်ပြီး စိတ်ဝင်တစား မရှိကြဘူးလို့ သိရပါတယ်။
Justify Full ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ သူ့အကြောင်းရုပ်ရှင် ရိုက်ဖို့ လာပြောကတည်းက သူ့အကြောင်းမရိုက်ပဲ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း ရိုက်ဖို့ ပြောသင့်တယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ အများစုကတော့ နိုင်ငံခြားက စပွန်ဆာပေးခြင်းဟာ မြန်မာလူထုအတွက် ကူညီချင်လို့ ရုပ်ရှင် ရိုက်ပေးခြင်းမဟုတ်ပဲ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲကြောင့် သာ ဖြစ်တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲနဲ့ ကူညီမှုတွေကို မကြိုဆိုသင့်၊ အားမပေးသင့်ဘူးလို့ သုံးသပ်သူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
အဲဒီ ဆိုက်ကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ပေးပါ။ကွန်မန့်ရေးပေးပါဦး
“ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင် နိုင်ငံအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ပုံချင်း ဆပေါင်းမျာစွာကွာခြားလှတဲ့ ခြေဖျားတောင် မမှီတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်”
သူမမိသားစုကိုစွန့်လွှတ်၊ နုနယ်ပျိုမျစ်တဲ့သူမငယ်ရွယ်တဲ့ဘ၀ကိုစွန့်လွှတ်ပြီး မြန်မာဆိုတာကမ္ဘာကသိအောင် နှစ်ပေါင်းများစွာအထီးကျန်နေခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ခွင့်ရခဲ့တာ ၁ နှစ်စွန်းစွန်းလေးပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒါကိုတောင်ပေးဆပ်တယ်လို့မမြင်ရင်ဘယ်လိုဟာက ပေးဆပ်တာများပါလိမ့်။
” ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အမျိုးဂုဏ်ကို မစောင့်ပဲ နိုင်ငံခြားသားကို လက်ထပ်ကာ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မျိုးဆက်ကို ပျက်အောင် လုပ်ခဲ့မိတာကြောင့် သူ့အမှားအတွက် ပြန်ပြီး ပေးဆပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ ရှိပုံပေါ်တယ်လို့ နေအိမ်ကို သွားရောက်ခဲ့တယ် လူငယ် မင်းသားတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။”
ဘယ်မင်သားပါလိမ့်။ သူကကော တိုင်ပြည်အတွက်ဘာများတာဝန်ယူ၊ တာဝန်ကျေခဲ့ဘူးပါလိမ့်။ သူကကောသာယာမကူးပဲပြည်သူ့ဘက်က ဦးကျော်သူတို့လိုရပ်တည်ခဲ့ဘူးပါသလား။ လွတ်လပ်ခွင့်ရပြီဆိုတော့မှတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုပြီးအခုမှထအော်နေတဲ့အနုပညာရှင်တွေအများကြီးပါ။ အရင်တုန်းကဖောရှောလိုက်နေကြတာပါ။ ရူချင်ယောင်ဆောင်နေကြတာပါ။ ဇာဂနာတို့က ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်တည်ခဲ့လို့အခုလိုနေရာရလာတာကျတော့မနာလိုဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ရှက်တတ်ရင်ရှက်ဖို့ကောင်းတာမသိကြဘူး။ အခုလိုနေရာရချင်ရင်အရင်ကတဲက ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်တည်ခဲ့ကြပါလား။ အခုမှတိုင်းပြည်ဘယ်လိုချစ်ကြောင်းအပိုတွေပြပြီးနေရာလိုချင်ကြတယ်။ မရှက်ကြဘူးလား။ မင်းသားနဲ့ဒါရိုက်တာနာမည်သိရင်ပြောပြပါ။ သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးချင်လို့ပါ။
ကိုချက်စူ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မြော်မြင်ခြင်းပေါ့ ကောင်းပါတယ် အရိုးသားဆုံးဝန်ခံရရင် ကျနော်ကိုယ် တိုင်လည်း နိုင်ငံအတွက် အခုအချိန်အထိ ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး လုပ်နေကြတဲ့လူတွေကိုလည်း ဘာမှအပြစ်မပြောလိုပါဘူး အားလုံးက အကောင်းဆုံးလို့ယူဆပြီးပူးပေါင်းလုပ်နေကြတာပါ ကိုချက်စူက ပွဲဆူစေလိုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သွေးတိုးစမ်းဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတော့ရှိမယ်ထင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီမရမခြင်း ဆံပင်မထားဘူး (ကတုံးနဲ့ပဲနေမယ်)ဆိုတဲ့ ကိုဇာဂနာတစ်ယောက် နှစ်ပေါင်း ဘယ် လောက်ကြာကြာ နေနေပါသလဲ၊ မိသားစုနဲ့ခွဲပြီးနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ သားပစ်လင်ပစ်နဲ့ မြန်မာပြည်မှာအနစ်နာခံ ဒုက္ခဆင်းရဲခံနေတဲ့ အမေစုက စတန့်ထွင်တာမဟုတ်သလို ကိုယ်ကျိုးတစ်ခုတည်းကြည့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါ့မလား။ နောက်တစ်ခု အရင်အစိုးရကရော ဒီပေါချာချာလူရွှင်တော်(ကိုချက်စူအပြောပေါ့) ကို ဘာအာဃာတတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ ထောင်ထဲထားခဲ့ တာလဲ။ အစိုးရကိုအလံဖြူထောင်ပြလိုက်ရင် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရလာနိုင်တာကို အလံဖြူမထောင်ပဲ ဘာလို့ သားတကွဲ မယားတကွဲထောင်ထဲမှာဒုက္ခခံနေသလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ ကိုချက်စူက ဒေါင်းနဲ့စင်ရော် မှားသွားတာထင်တယ် စင်ရော်ကမှ လင်းတနဲ့ပေါင်း မျိုးမစစ်တွေဖြစ်နေတာ မြန်မာပြည်နွံနစ်နေတဲ့ အဓိကတရားခံကဘယ်သူလဲ သေချာဥာဏ်မီသလောက် စဉ်းစားပေးပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေ ကျနော်တို့ဒေါင်းတွေကတော့ အမြင်မတူလည်းရန်သူလို့သဘောမထား ပါဘူး အားလုံးကို လက်တွဲခေါ်သွားဖို့အသင့်ပါ ကိုချက်စူက တပ်မတော်အငြိမ်းစား၊ကြံ့ဖွံ့ဆိုပြီး မချန်ခဲ့ပါ ဘူး အမြင်မတူတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးရတော့ ပိုပြီးဗဟုသုတရပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အဲဒီ ဆိုဒ်ကို ၀င်ကြည့်ပြီးပါပြီ…
စိတ်ပျက်စရာကောင်းလိုက်ပုံများ အောက်တန်းကျလိုက်ပုံများ ဒီအတိုင်း ငယ်ကျိုးငယ်နာဖေါ်ပြီး ထိုင်ဆဲနေတဲ့ ဆိုဒ်ပါ…
အော် ဒီလောက်ရုပ်ညံ့တဲ့သူများရှိသေးရဲ့လို့ သြချခဲ့ရပါတယ်…
ပြန်ပြောချင်စိတ်တောင်ကုန်ပါတယ်… ခွေးရူးနဲ့ဖက်ကိုက်ရသလို ၀င်ပြောရင် ကိုယ်ပါသူတို့နဲ့တစ်တန်းတစ်စားထဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ ဆိုဒ်ပါ…
မင်းတို့ပထွေး ဆိုက်ဝါး ကကောင်တွေ ဒါမျိုး ပါးစပ်သရမ်းလာတာ နှစ်ငါးဆယ်ရှိပြီ။
ပြည်သူက ဘာတလုံးမှမယုံတာ လက်တွေ့။
မင်းတို့ဟောင်လေ ခဲနဲ့ပေါက်ချင်လေပဲ မို့
ဒီပေါ်က စာသားတွေဟာလဲ မင်းတို့အမေလင်တွေကို ဆထက်ထမ်းပိုး အကြည်ညိုပျက်စေဘို့
(ထုံးစံအတိုင်း) အထောက်အကူပြုပါတယ်လို့ အားပေးလိုက်ပါတယ်။
(တင်ပေးတဲ့ chatsu ကိုပြောတာမဟုတ်ပါ။ ပိုစ့်မှာပါတဲ့ စာတွေကိုရေးသူကို ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
ဘယ်လို လူက ဒီလို ပို့စ်မျိုးရေးလဲ မသိပေမယ့် … ချီးစားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တောင် ဒီလောက် မမိုက်ရိုင်းဘူး ။
ဖတ်ရတာ အော့နှလုံးနာစရာပါပဲ …. ။ ထွီ
(((ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လျှင် နိုင်ငံအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ပုံချင်း ဆပေါင်းမျာစွာကွာခြားလှတဲ့ ခြေဖျားတောင် မမှီတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းကိုတော့ နိုင်ငံခြားကနေ စပွန်စာထုတ်ပေးကာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ပေးကြပြီး ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကိုတော့ ရိုက်မပေးလို့ ကိုယ့်ဘာကိုရိုက်ရမယ်ဆိုတာက လုံးဝ မဖြစ်သစ်ဘူးလို့ ဝါရင့် သမိုင်းဆရာတစ်ယောက်က အပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ))) ဆိုတာကတော့ နည်းနည်းများနေပြီ … သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ် ဖြစ်နေတဲ့ အခြေနေချင်းမှ မတူပဲ …သူငယ်တန်းကလေးတောင် ဆက်စပ်တွေးခေါ်တတ်တာ…… နွားခြေရာခွက်ထဲက စာရေးသူကို ဘာနဲ့များ ခိုင်းနှိုင်းရပါမလဲ … ။
တစ်ခါလာလည်း ဒီလင် ယူတဲ့ ကိစ္စပဲ ထောက်နေတာ .. အဲ့ဒီလို လင်ယူအောင် ဘယ်သူကပို့ပေးလိုက်တာလဲ ( ဥာဏ်သိမ်လျှင် ဆရာ ဆယ်ခါ ခေါ် ပြောပြမယ်)
ကိုယ်တိုင်က ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ပဲ အသံကောင်းဟစ်နေလျှင်တော့ … လျှာတန်းလန်းထွက်ပြီး မောရုံကလွဲလို့ တခြား ဘာမှ မရှိဘူး … ။
အန်တီစုကို တိုက်ခိုက်ပြောနေလို့လည်း ဟိုက အဆီမလျှော့ အသား မလျှော့ ….
အန်တီစုကို လေးစားတဲ့စိတ်က သူများအတင်းရိုက်သွင်းပြီးမှ ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ … ငကြောင်တွေ သိဖို့ကောင်းတယ် … ။
အောင်မလေးဗျာ………… ၆ကျိုးနဲ (ဆြာဂီပိုစ့်မှ)
သူတို့ ၆ရူးလိုပြောဒါများ နာ့နာမည်က ကြားလာလာညပ်ရသေးတယ်
တေဂျင်းဇိုးဒွေ (ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင်ဆဲပစ်လိုက်ပီ)
” ကြည့်ရတာ လူရွှင်တော် ဇာဂနာ ဒါရိုက်တာလုပ်မယ့်ပုံပါ…. ဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိပဲ ရုပ်ရှင်ကားကြီး ရိုက်မယ်ဆိုတော့ ကောင်းကောင်းတော့ ထွက်လာမယ် မထင်ဘူး.. ပြီးတော့ လူရွှင်တော် ဇာကနာက သမိုင်း အလွန်အားနည်းသူဖြစ်တယ်… ”
အင်းပြောရင်လဲအောင်မင်းလွန်ရာကျမယ်။ ဇာဂနာ သမိုင်းအားနည်းမနည်းတော့မသိဘူး။ ကျွန်မသားအပါအ၀င် အခုခေတ်ကလေးတွေသမိုင်းအားနည်းတာတော့သေချာတယ်။ တရားခံဘယ်သူလဲတော့မမေးတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာကြပါ။ အဖြစ်အပျက်ပဲပြောတော့မယ်။ တနေ့ကျွန်မသားလေးကျောင်းကပြန်လာတယ်။ မနက်ဖြန်ကျောင်းပိတ်တယ်မေမေတဲ့။ ဘာလို့လဲသားလို့မေးတော့ အာဇာနည်နေ့မို့တဲ့။ ကျွန်မလဲအတော်သဘောကျပြီးမေးလိုက်တယ်။ အာဇာနည်နေ့ဆိုတာဘာလဲလို့။ အဲဒီမှာပက်လက်လန်တာပဲ။ သူငယ်ချင်းပြောတာတော့ အာဇာနည်သီချင်းလာဆိုမှာမို့လို့တဲ့။ ဒါနဲ့ကျွန်မလဲရှင်းပြဖို့ပြင်ရတော့တာပေါ့။ သား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာသိလားလို့။ ကျွန်မသားအားရပါးရပြန်ဖြေတာကတော့ သိတယ်လေတဲ့၊ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးလေတဲ့။ ဟိုနားမီးပျက်စေ၊ဒီနားမီးပျက်စေလုပ်နေတာလေတဲ့။ ကဲဘယ်သူဘာပြောအုံးမလဲ။
ဒီပိုစ်ကို ရေးတဲ့သူ တင်တဲ့ သူတွေက ရည်ရွယ်ချက် တခုခု ရှိပါလိမ့်မယ်။
ဇာဂနာ သမိုင်း အားနည်းသလား မနည်းသလား စောင့်ကြည့်ရင်တော့ သိမှာပေါ့..
အနုပညာရှင်တွေ ကို အထင်မကြီးပေမဲ့ ဇာဂနာ ကိုတော့ အထင်မသေးဘူး။ သူ့ပညာ မပြည့်ဝရင် ဒီလို နာမည်ကြီးမလာဘူး။ ဘယ်ဟာမှ အလကား မရဘူး.. သူ့ရဲ့ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကလည်း လုပ်ယူတိုင်း ရတာ မဟုတ်ဘူး။
သံဃာသရဏံ ဂန်းစာမိ ဆိုတဲ့ စကားလေး စကြားတဲ့ အခါမှာ ကြားလိုက်တာ ငိုရမလို ရယ်ရမလိုတောင် ဖြစ်ဖူးတယ်။
မသိသေးရင် လေ့လာလို့ ရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ပညာရှင်တွေ ရှိပါတယ်။ စိတ်လိုလက်ရ ပူးပေါင်းပြီး ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။